एक मुखे रुद्राक्ष देख्नवित्तिकै ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस्, नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ हुनेछ ! - Kohalpur Trends
अचम्मका खबर जीवन शैली रोचक
एक मुखे रुद्राक्ष देख्नवित्तिकै ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस्, नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ हुनेछ !
trendsminad November 12, 2020	No Comments
एक मुखे रुद्राक्षको दर्शन गर्नाले नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ हुन्छ । कमेन्टमा ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस ३ दिन भित्र आक’स्मिक धन लाभकाे योग हुनेछ । बेवास्ता गरेमा “अशुभ” हुन सक्ला । एकमुखे रुद्राक्ष यसको वर्णन शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा पाउन सकिन्छ । यसलाई शिवको प्रतीक मानिन्छ । अत्यन्तै दु’र्लभ तर शक्तिशाली हुनाले यसलाई अनमोल वरदान पनि मानिन्छ ।
सिद्धियोग परेको बिहीबारका दिन आकाशबाट परेको पानी रुद्राक्षको फूलमा परी तत्काल बन्द हुँदा त्यसबाट एकमुखे रुद्राक्ष फल्न सक्छ भन्ने पनि शिवपुराणको रुद्राक्ष महात्म्यमा उल्लेख छ । लोकश्रुति अनुसार, एउटा बोटमा यस्तो रुद्राक्ष १२ वर्षमा तीनवटा मात्र फल्छन् । जसमध्ये एउटा आकाश र अर्को पातालमा जान्छ भने तेस्रोचाहिँ धर्तीमा रहन्छ । यो शिवरात्री, पूर्णिमा वा विशेष दिनमा मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ ।
रुद्राक्ष नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा पाईने वनस्पति र यसमा फल्ने फल हो । यसको रुख र फल दुबैलाई नेपाली,संस्कृत र हिन्दी भाषामा रुद्राक्ष भनिन्छ । रुद्राक्षको एकै बोटमा एकपटक फल लाग्दा विभिन्न मुख, आकार र विभिन्न नापका दानाहरू फल्दछन् । यसको दानामा माथिबाट झरेका रेखाहरू (Vertical ) रेखाहरू हुन्छन् । त्यही रेखालाई मुख भनिन्छ र जतिवटा रेखा हुन्छन् त्यति नै मुखे रुद्राक्ष भनिन्छ ।
यो फल(रुद्राक्ष) एक मुखे देखि २७ मुखे सम्म भएको बिश्वास गरिन्छ । यो संस्कृतको रुद्र र अक्ष बाट बनेको हो । शाब्दिक अर्थमा यो भगवान शिवको अश्रु जलबिन्दु मानिन्छ । नेपाली शब्दसागर शब्दकोषमा रुद्राक्ष शब्दलाई “लामा-लामा हरिया केशर हाँगामा-फूल सेता हुने स्याउले एक ठूलो जातको रुख र त्यसैको साना ओखर वा तिमिला खाले काँडे फल” भनेर परिभाषित गरिएको छ । रुद्राक्षलाई हाम्रो गाउँघरमा दाना भनेर पनि चिनिन्छ ।
धार्मिक महादेवको वस्तुका रूपमा वनस्पति रुद्राक्षको महिमा धेरै छ । रुद्राक्षको उत्पत्तिका बारेमा पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिवले महाबली दैत्य सुरलाई नाश गर्न लामो समयसम्म चिन्तन गरी आँखा खोल्दा शिवको सूर्यमुखी आँखाबाट बगेको आँसुका थोपा निस्की विभिन्न ठाउँमा छरिन गए । यिनै छरिएका आँसुका थोपा वृक्षमा परिणत हुन गएकाले शिवका आँसुका उपजलाई रुद्राक्ष वृक्षहरू भनेर नामाकरण गरियो ।
‘रुद्राक्ष रहस्य’ नामक पुस्तकका अनुसार रुद्राक्ष २७ मुखीसम्म हुन्छ भनेका छन् भने हालैको खोजअनुसार संसारभरि ३८ मुखीसम्म रुद्राक्ष पाइएको खोजकर्ताले बताएका छन् तर सामान्यतः १ देखि १४ मुखीसम्म मात्र सर्वसुलभ उपलब्ध हुन्छन् । एकमुखी र नौ मुखीदेखि १४ मुखी रुद्राक्ष निकै दुलर्भ मानिन्छ ।
The put up एक मुखे रुद्राक्ष देख्नवित्तिकै ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस्, नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ हुनेछ ! appeared first on The Buddha Khabar.
Previous Previous post: तपाईसँग भएको पुरानो नोट बेच्नुस र लखपति बन्नुस्, १० लाख भन्दा बढी यी पुरानो नोटको मुल्य ? हेर्नुहोस यो माध्यम बाट बेच्न सकिन्छ
Next Next post: नेकपा एकताको आधार : भदौ २६ कि असार १६ ?
सांसदको नाममा किन बजेट दिएको होला भन्थें तर चाहिने रहेछ : भट्टराई
trendsminad November 30, 2020	No Comments
१५ मंसिर, पोखरा । रवीन्द्र अधिकारीले ह्याट्रिक गरेको क्षेत्रबाट चुनाव जितेर उनकै पत्नी विद्या भट्टराई अहिले सांसद छिन् । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा…
बिराटनगरमा एम्बुलेन्स दुर्घटना, एकजना बिरामीको मृत्यु
१५ मंसिर, बिराटनगर । बिराटनगरमा एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा एकजना विरामीको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा तीनजना घाइते भएका छन् । बिराटनगर महानगरपालिका–४ कञ्चनबारीस्थित कोसी राजमार्गमा…
नेपाली पक्षसँग भएका कुराबारे यसो भन्छ चिनियाँ रक्षा मन्त्रालय
१५ मंसिर, काठमाडौं । चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बारेमा एकदमै कम जानकारी दिइएको छ । समाचार संकलनमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई केही पहुँच दिइएको छ । भेटवार्तामा…
हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका कोरोना मुक्त
१५ मंसिर, हुम्ला । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका आइतबारदेखि कोरोना सङ्क्रमणमुक्त बनेको छ । आइतबार एन्टिजेन विधिबाट गरिएको कोरोना परीक्षणमा ४४ जनामा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि…
trendsminad November 30, 2020 No Comments